Nnwom 132 NA-TWI - Ahobrɛase mu ahotoso mpaebɔ - Bible Gateway
Nnwom 131Nnwom 133
Nnwom 132 Nkwa Asem (NA-TWI)
132 Awurade, mma wo werɛ mfi Dawid ne ɔhaw ahorow a otumi gyinaa ano no. 2 Awurade, kae bɔ a ɔhyɛɛ wo no; ɛbɔ a ɔhyɛɛ wo, Yakob Nyankopɔn Tumfoɔ no. 3 Merenkɔ fie, na merenkɔda; 4 merenhome, na merenna 5 gye sɛ, mapɛ baabi ama Awurade, Yakob Nyankopɔn Tumfoɔ no.